Hoyga internetka ee wanaagsan waa waajib saaran dhammaan bogagga iyo blogyada; MEN oo aan khasab ahayn inaad ku darto gacanta iyo lugta.
VirksomhedQiimeeynta SaxeexaQiimaha CusbooneysiintaDomain-ka DiiwaangashanDomain Free? Socdaalka Soogalootiga Bilaash ahPenge Tilbage
Soo dhaweynta $ 0,80 / mo $ 7,99 / mo 1 Maya Haa 30 maalmood
InMotion Hosting $ 3,99 / mo $ 7,99 / mo 2 Maya Haa 90 maalmood
InterServer $ 5,00 / mo $ 5,00 / mo Ubegrænset Maya Haa 30 maalmood
A2 Hosting $ 3,92 / mo $ 7,99 / mo 1 Maya Haa Wakhti kasta
HostPapa $ 1,67 / mo $ 9,99 / mo 2 Haa Haa 30 maalmood
GreenGeeks $ 2,95 / mo $ 9,95 / mo 1 Haa Haa 30 maalmood
TMD Hosting $ 2,95 / mo $ 4,95 / mo 1 Haa Haa 60 maalmood
WebHostFace $ 0,69 / mo $ 6,90 / mo 1 Maya Maya 30 maalmood
FastWebHost $ 2,97 / mo $ 5,95 / mo 1 Haa Maya 30 maalmood
iPage $ 1,99 / mo $ 7,99 / mo Ubegrænset Haa Maya 30 maalmood
Qorshaha ugu qaalisan ee la saxiixo: $ 0,80 / mo – Riix halkan si aad u dalbato hadda
Qorshaha ugu raqiisan ee macaamiisha – “Single” waxaa lagu qiimeeyaa $ 0,80 / mo. Qiimaha voks ka yar hal doollar, waxaad uheleysaa inaad martigeliso websaydhka 1 oo leh xadka diskiga 10 GB iyo 100 GB båndbredde, oo lagu daro astaamo cusub side shaqooyinka cron hore, Curl SSL, MariaDB iyo keadahdah Helin. ka hel qorshaha martigelinta miisaaniyad.
Haddii aad diyaar u tahay inaad waxyar ka badan bixiso, Qorshaha Marti-gelinta ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah (wuxuu ka bilaabmayaa $ 2,15 / mo) wuxuu la imanayaa BitNinja Smart Security oo bilaash ah, kaasoo kaa difaacaya XX, tiro kale oo weerarro internetka ah; iyo Mail Assassin, oo kaa difaacaya farriimaha spam.
0.2 4 – A2 Hosting
0.2.1 Marti-gelinta ‘værtPapa’
0.6.1 Haddii aad ku socoto websaydh heerar ganacsi oo raadinaya qalab aad u awood badan, ka fiiri Nagios Uptime og kaktus. Dhibaatada # 3: deriska xun Mararka qaar, martida qiimaha jaban waxay ku dhacaan waxa loo yaqaan ‘deriska xun’. Derisyadaan xun ayaa ah kuwa isbaaraya kuwaas oo cunaya sahayda adeegga ama kuwa websaydka aan sharciga lahayn ee la jabsaday. Haddii aad la wadaagto server-ka leh spamka, ma jiri doonto ilo kugu filan. Haddii aad la wadaagto adeegsade qof leh tiknoolajiye ama fayraska kombiyuutarka, goobtaada ayaa laga yaabaa inay qaadsiiso sidoo grøn. Xalka: Hubi martida IP-ga kahor intaan la gelin
0.9.1 Xalka: Ku dhaji marti-geliyaha u oggolaanaya 150.000 inod i kor
2 I nøddeskal ah: Dhammaan Webka Guurtidu waa mid xun
Marka la soo koobo, waan tan waxa aan jeclahay og ku ku necbaado ee ku saabsan Bogagga internetka. Waxaad voksbadan ka baran mapa khibradeena ku aadan dib u eegista qotada dheer ee Martida.
Ku hay hal domæne kaliya hal koonto
Magaca domæne ee bilaash ah
Qorshaha ugu qaalisan ee la saxiixo: $ 5,00 / mo – Riix halkan si aad u dalbato
Laba waxyaalood oo til jeclahay voks sammen med InterServer:
Shirkadu ma kordhin qiimaha ka dib markii muddada koowaad – InterServer tilbyder Qorshaha martigelinta waxaa lagu xiraa $ 5 / mo, iyo
Waxay u oggolaanayaan dadka isticmaala inay ku martigeliyaan domæner til xadidnayn oo ka hooseeya $ 5 / mo (qorshayaasha miisaaniyadeed ee aynu ka wada hadalnay qodobkan waxay u oggolaanayaan hal domæne midkiiba)
Labadan arrimood waxay sameeyeen InterServer dooro sahlan marka aad qorsheyneyso i aad ku martigeliso shabakado badan oo ah (baabuurta yar yar) ee xisaabta hal jeer oo ka badan sanadada 5.
Waxaan bilaabay isticmaalka InterServer tan iyo 2013 oo booqday shirkadda HQ ee Seekaucus, New Jersey ee 2016. Hawlgalkooda adeegyadu waxay ahaayeen taageerooyin adag oo adag oo taageero farsamo ah (dhammaantood waxaa sameeyey shaqale) Waxaad akhrin mapa aniga faahfaahin dheeraad ah ee InterServer dib u eegis.
Waxqabadka ugu wanaagsan ee server; TTFB <550 ms
Far badan oo qolka u koraya – dadka isticmaala waxay kor u qaadaan soogalootigooda VPS, daruurta, iyo martigelinta marti gelinta
Qorshaha ugu qaalisan ee la saxiixo: $ 3.95 / mo – Riix halkan si aad u dalbato
Waxaan sameayay a wareysi uu soo qaaday HostPapa, Jamie Opalchuk, December 2016. Waxaan ka wada hadalnay howlaha shirkadaha iyo ganacsiga; Jamie wuxuu ahaa midt aad u hufan oo voks ku ool ah jawaabihiisa.
Waxaan raadineynay martigeliyaha webka tan iyo bartamihii 2017. Waxaad voks voks badan ka baran korta khibrada aan ku leeyahay eeg faahfaahintan HostPapa.
Shakhsi ahaan waxaan helay HostPapa oo ah hoy wanaagsan – ma ahan kuwa ugu fiican, laakiin qiimaha jaban ee raqiis ah waa hubaal weyn oo dheeraad ah – iyada oo tixgelinaysa i qorshaha ugu jaban uu sidoo kale la bimaash iyo 120 bilaash ah oo lagu dhisay boggan.
Fursadaha la’aanta goobaha adeegga (martida Canada oo kaliya)
I ka badan sanadihii 15 ee diiwaanka ganacsiga la xaqiijiyay
Værd at pengene – $ 2.95 / mo si aad u marto goobo aan xadidnayn oo koonto ah (oo leh nuqul maalinle ah)
Qorshaha ugu qaalisan ee la saxiixo: $ 2.95 / mo – Riix halkan si aad u dalbato
Marka ugu horeysa macaamiisha, qorshaha wadaagga ee TMD wuxuu ka bilaabmaa $ 2,95 / mo – 60% qiimaha qiimaha cusbooneysiinta. Shirkadu waxay ku dhowdahay i ka badan sanado 10 voksinger ku yaal langtfra xarumo xogeed oo ku baahsan Maraykanka iyo xarun xogeed oo dibedda ah ee Amsterdam.
Waxaan dhowaan la siiyay xisaab bilaash ah TMDHosting sidea darteed waxaan go’aansanay inaanu bixiyaha martigeliyaha u imtixaanno. Diido – miisaaniyadda miisaaniyadda ma aha mid xun.
Standard CloudFlare kaliya
Xoogaa aad u jaban – kaliya $ 0,69 / mo inta lagu jiro diiwaangelinta
Waxqabadka-server er altid tilgængelig, celceliska martigelinta wakhtiga kor ku xusan 99,9%
Qorshaha ugu qaalisan ee la saxiixo: $ 2.97 / mo – Riix halkan si aad u dalbato
FastWebHost (FWH) qorshaha martigelinta ugu jaban (oo loo yaqaan "Værdi") wuxuu ku bilaabmaa side hooseeya $ 2,95 / mo.
Læs Dib u eegista Jason’s FastWebHost iyo Abrar Bixiyeyaasha ugu wanaagsan ee Hindiya si aad wax dheeraad ah uga ogaato shirkadda. Waxaan sameynay baaritaanno fara badan oo ku saabsan FWH waxayna u maleynayaan inay yihiin mid ka mid ah adeegyada ugu wanaagsan ee lagu wadaago ee India.
Ku marti hal domæne kaliya leh xisaab 20 GB kharashka koontada
75% qiimo dhimis lagu saxiixay – la wadaago martigelinta $ 1,99 / mo
Macmiilka aan xad laheyn oo magac domæne ah hal koonto
Si aad ah u taxaddar inta lagu jiro nidaamka jeegga, hubso in shirkadda martigelisay aysan ku soo saxiixin barnaamijka ama adeegga internetka. Waxaad ka hubin mapa martigeliyaha martigelinta taageerida sheekadaada haddii aad shaki qabto oo aad weydiiso haddii aad saxiixday ilaa adekvat internet ah.
Ka walwalsan e-emiri kasta iyo talooyin aad ka hesho shirkadda martigelinta. Iska ilaali in aad indha la tiigsato oo aad cilmi baaris ka sameyso ka hor inta aadan saxiixin voks kasta oo ku from kara xisaabtaada.
Tababarka waxaa loo yaqaan side kormeerid. Inkastoo korjoogteyntu ay wanaagsan tahay in la keeno kharashka martigelinta hoosta (voks badan ka baro maqaalkayga kale – Xaqiiqada ubegrænset hosting); mararka qaar khatar gelin kara khibrada isticmaalaha. Meelaha lagu martiqaaday serverka far badani waxay keenaysaa hoos u dhac ku yimaada jawaab celinta iyo wakhtiyo badan oo soo noqnoqonaya.
Haddii aad ku socoto websaydh heerar ganacsi oo raadinaya qalab aad u awood badan, ka fiiri Nagios Uptime og kaktus.
Derisyadaan xun ayaa ah kuwa isbaaraya kuwaas oo cunaya sahayda adeegga ama kuwa websaydka aan sharciga lahayn ee la jabsaday. Haddii aad la wadaagto server-ka leh spamka, ma jiri doonto ilo kugu filan. Haddii aad la wadaagto adeegsade qof leh tiknoolajiye ama fayraska kombiyuutarka, goobtaada ayaa laga yaabaa inay qaadsiiso sidoo grøn.
Waxaa lagu talinayaa in aad eegto boggaaga internetka e IP-ga SpamHaus Block List side ugu dhakhsaha badan ee aad xisaabtaada u heshay Ama ka sii fiican, weydii liiska IP-yada si loo eego ka hor intaadan saxiixin.
Haddii nasiib daro i IP-server-servere, hvor du vil have adgang til, at du vil prøve at vokse godt på kaliya oo på samme side: 1. Riix hoyga internetka si aad u akhristo caddaanka IP; iyo 2. codsiga dib u dejinta ama isbedelka cinwaanka IP.
Akhri TOS (calaamada degdegga ah: u tag bogga loo yaqaan ‘ToS’ ee bogga, riix Ctrl + F, raadi erayga muhiimka ah ‘joojinta’ iyo ‘lacag celin’) si cad u hubso side loo joojin lahaa. Hoyga webka ayaa laga yaabaa i lagu dalaco diiwaangelinta domainka (oo laga yaabo inuu ku kaco hal mar oo ah $ 25) iyo khidmadda SSL; laakiin voks kasta oo intaas ka badan waa tan aan tegin.
Ha raacin kuwa leh siyaasad joojin kalluunka ah iyada oo aan loo eegin side ay u jaban yihiin.
Waxaa jira havde iyo jeer shuruudaha iyo xaaladaha ka dambeeya soo jiidashada raqiis raqiis ah (voks dheeri ah baro).
Shirkadaha martigelinta ee ugu wanaagsani havde iyo jeer ma joogaan raqiis.
Nasiib darro, tani waa xeerarka warshadaha. Shirkadahaas badankoodu måde waayaan lacagta inta lagu jiro labada ama saddexda sano ee ugu horreysa ee ay haystaan ​​macaamiil, sidaas awgeed waxay qiimeeyaan sicirka sare si ay dib ugu soo celiyaan khasaarahoodii. Qaar badan oo macaamiisha ah ma ogaanayaan inay bixinayaan qiime sare waxayna helayaan shoog adag marka ay arkaan lacagta baabuurta ee ku qoran warqadda kaararka deynta.
Qiimaha aad u qorto waa qiimaha aad cusbooneeysiineyso cusbadaada martigelinta mustaqbalka. Tusaale ahaan, FastComet macaamiisha kuwaas oo saxiixa seddex sano $ 2,95 / bishii waxay awoodi doonaan inay dib u cusbooneysiiyaan qorshooyinkooda mar dambe $ 2,45 / bishii. Isla waa isku midt i InterServer – kaas oo u oggolaanaya macaamiisha inay cusboonaysiiyaan qiimaha saxda ah.
Qaar ka midt a martigaliyeyaasha websaydhku waxay codsan doonaan macaamiishooda inay ku biiraan muddo aad u dheer iyaga oo beddelaya sumadaha qiimaha hooseeya.
Sannado badan ka hor Lunarpages suuq gashay wada-xaajoodka la wadaago side $ 4,95 / mo. Laakiin heshiiska $ 4,95 / m waxaa kaliya loogu talagalay macaamiisha kuwaas oo diyaar u ah inay bixiyaan sanadaha 5 ee hore – taas oo ah rip off-off. 5 sano ah! Wax kasta waxay ku dhici internet internet xilliga 5 sanadka, shirkada martigelinta ayaa kaliya qaadan kort lacagtaada og dukaanka dhaw.
Xalka: Ku dhaji marti-geliyaha u oggolaanaya 150.000 inod i kor
Anigu voks badan baan ku fekerayaa maalmo maalmahan, laakiin ma aanan tegeynin marti-geliyeyaasha 50.000.
Xalka ugu sahlan ayaa ah inaad aqriso shirkadda ToS ee shirkada (talo bixin deg deg ah: u tag bogga martigelinta ToS bogga, riix Ctrl + F, raadinta ereyga muhiimka ah side ‘inodes’ iyo ‘tirada faylasha’) si cad korah.
Dhinaca grønkål, waa masuuliyadaada inaad ku xaddiddo tirada lambarada ku jira xisaabtaada. Fahmaan i martigelinta aan xadidnayn aysan xadidnayn. Hayso faylasha la duubay ee koontadaada, tirtirto faylasha aan loo baahnayn, tirtirto emaylada si joogto ah (boorka faaruqa iyo xayeysiisyada u soo dir PC-gaaga), iyo in la xoojiyo xogtaada.
Tusaale ahaan: marti-geliyuhu wuxuu u ogolaanayaa ilaa 250.000 inot ka mid ah xisaabaadka marti-galinta la wadaagayo (taas oo ah deeqsi $ 2,15 / moh). Voks badan ka baro dib-u-eeggeena martida.
Jawaabtu waa $ 0. I kasta oo ay naadir tahay, haddana waxaa jira dalabyo marti-gelis websaydh ah oo bilaash ah side ‘000Webhost’ oo la socda underdomæner (tusaale. Mydomain.000webhost.com) oo aad u isticmaali karto in ooad ku abuur aad ku socodsiiso degel kharash kharash eber ah. Waxaa jira, si kastaba ha noqotee, xaddidaadyo iyo khataro kala duwan oo ku lug leh marti-gelinta bilaashka ah – haddii aad awoodid inaad bixiso $ 3 – $ 10 bishii, Waxaan si xoog leh kuugula talinayaa inaad raackais deha lahayd.
Martigeliyaha martigeliyaha ee la wadaago wuxuu bilaabmaa $ 0,90 bishii – waa kuwa ugu raqiisan kuwa bixiya martigaliyayaasha ugu sareeya. Si loo qiimeeyo waxqabadka martigeliyaha, waxaan ku marti qaadaa goobta tijaabinta mashiinkooda waxaanan ku daabacaa xogta waqtigeeda / xawaaraha aan soo qaado halkan. Waad ka aqrisan mapa waaya aragnimadayda tan si faahfaahsan dib u eegista Hostinger.
Waxaa jira afar nooc oo waaweyn oo marti-gelinta websaydhada ah oo la wadaago, server-ka gaarka loo leeyahay ee gaarka loo leeyahay (VPS), daruer, iyo marti-gelinta server server go go. Midt kastaa wuxuu bixiyaa heerar kala duwan oo waxqabadka, isku halleyn ah, iyo amniga.
Bixiyeyaasha side Wix iyo 000Webhost waxay bixiyaan qorsheyaal bilaash ah. Si kastaba ha noqotee, marti sharaf badan oo websaydh ah ayaa sidoo kale bixiya waqtiyo tijaabo ah oo ku saabsan qiimeynta martigelin macquul ah oo qiimo leh waxaanan kugula talineynaa inaad isku daydaan labadiinaba inaad ara.
Wix runtii waxay bixisaa qorshe bilaash ah oo xadidan. Si kastaba har noqotee, qorshahan bilaashka ahi wuxuu la yimaadaa dib-u-dhacyo badan oo ay ka mid yihiin awood la’aanta ku-xirista boggaaga caadada ah iyo xayeysiinta Wix ee ku taal bartaada.
WordPress CMS laftiisa ayaa xor u ah inaad istcimaao sidoo kale waad u isticmaali mapa si bilaash ah WordPress.com (iyadoo xadidan tahay).
Marti-gelinta bilaashka ah guud ahaan kuma habboona isticmaalka muddada-dheer ilaa aad ka-talo-galeyso inaad maamusho websaydh aad u hooseeya, cabbirka taraafikada oo hooseeya. Bogagga intarnetka badankood waxay u baahan doonaan ilo badan inta ay weynaanayaan mana u eg tahay i marti-gelinta bilaashka ahi ay awoodi doonaan inay la jaan qaadaan kobacaas.
I nøddeskal ah: Dhammaan Webka Guurtidu waa mid xun
Shirkadaha aan la wadaagin dhammaantood waa kuwo xun. Qorshaha martigelinta aan xadidneyn ee aan la wadaagin ayaa ah kuwo aad u caan ah oo xooggan maalmahan. I ka badan 90% shakhsiga ayaa martigelinaya domæne iyo goobaha qorshaha martigelinta la wadaago.
Kama sameysid ‘køligere’ boggeeda ama si ka wacan sababtoo ah waxaad dooranaysaa xal qaali ah. Ma aha i la sheego – haddii aad isbarbardhigto, waxaa jira waxyaabo badan oo qalad ah oo aad u khaldan oo la xariira martigelinta ama VPS martigelinta.
Qaar ka mid ah milkiilayaasha goobta ayaa loo wareejiyay VPS ama martigelinta khaaska ah si fudud sababtoo ah kibirkooda – oo ah nooca fikirka halka ay moodayaan inay ka duwan yihiin oo ka roon yihiin. Laakiin taasi køre ma ahan. Xaqiiqdii, waan ogahay qaar ka mid ah milkiilayaasha ganacsiga yar yar oo u weeksdag martigelinta u heellan markii aysan u baahnayn, wayna ka qoomameeyeen. Waxay ku kharash gareeyeen kheyraadka kombuyuutarrada ee aan loo baahnayn iyo kaaliyaha farsamada khibradeed markii marti-gelinta la wadaago ay fiicnaan laheyd.
Haddii aad iibsaneyso voks aadan u baahnayn, waxaad lumineysaa lacag iyadoo aan loo eegin side rakhiis ama ay fiican tahay.
Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad ogaato baahidaada martigelinta ee adiga ka hor dooro marti-geliye cusub. Ka hor intaadan ka bixin boggan si aad u iibsato martigeliye, hubi inaad haysatid fahamka aasaasiga ah ee martida webka and magac domain. Si taxadar leh uga feker baahidaada iyo ka jawaab su’aalahan –
Ma rabtaa voks caadi ah?
Ma u baahan tahay barnaamij gaar ah oo software ah (dvs. PHP)?
Miyuu websitkaagu u baahanyahay software gaar ah?
Dooro marti-geliye websaydh ah oo aad awoodi kartid ugu yaraan sanado 2. Boggaaga / blogkaagu voks lacag ah ma sameyn karo, gaar ahaan marka ugu horeysa, sidea darteed waxaad dooneysaa inaad hubiso inaanad xirabo lahaha.
Waqtiga hadda waa i aad diirada saartaa dhismaha waxtar leh iyo kordhinta bulshadaada. Waa in aad wax badan ku bixisid suuqgeynta iyo indhold. Hel adeega warside wanaagsan oo billow dhismaha liiska emailkaaga, bilaw xayeesiinta suuq-geynta warbaahinta bulshada, waxaad la xiriirtaa bloggere gudaha ah oo aad kireysaneysid si aad kor ugu qaadatid blogkaaga, iwm.
Weydii su’aalaha ku saabsan adeegga macaamiisha iyo haddii ay kaa caawin doonaan inaad fahamto website-ka sababtoo ah waxaad ku cusub tahay blogging.
Miisaaniyadda la soo jeediyey Webhost venlig: A2 Hosting, Interserver, Daruuraha